Flexible Garden Water Pool Material: Non Pox PVC Tarpaulin Ubunzima: 0.6mm- 1.2mm Imilo: Round / Circle Umbala oqhelekileyo: grey, orenji, luhlaza, luhlaza, mhlophe okanye eminye imibala. I-ODM / Izinto eziluncedo ngokwezifiso: 1. Ngaba izibonelelo zamandla aphezulu, ukuqina okuhle, ukumelana nobushushu 2. Ngaba ukuxhathisa kakuhle ukuqhekeka koxinzelelo lwendalo, amandla okondla, kunye neasidi, ialkali, izinyibilikisi zendalo, njl. umhlwa ...
Intshayelelo Product Product: Inetyhefu PVC Tarpaulin Ukutyeba: 0.6mm-1.2mm Imilo: Round / Circle Umbala oqhelekileyo: ngwevu, orenji, luhlaza, luhlaza, mhlophe okanye eminye imibala. Izinto eziluncedo ngokwezifiso: 1. Ngaba izibonelelo zamandla aphezulu, ukomelela okuhle, ukumelana nobushushu 2. Ngaba ukuxhathisa kakuhle ukuqhekeka koxinzelelo lwendalo, amandla okondla, kunye neasidi, ialkali, izinyibilikisi zendalo, njl. 3. Yiba nokuguga, ii-corros. ..
Iitanki zenziwe ngelaphu eliqinisiweyo kunye ne-PVC / TPU egutyungelweyo kwaye ibonisa imilo yomqamelo xa itanki igcwele.
Ingasetyenziselwa ukugcina amanzi emizi-mveliso, amanzi omlilo, ukuvuna amanzi emvula, amanzi okunkcenkceshela, amanzi axubeneyo ekhonkrithi, amanzi athambileyo aluhlaza, ukugcinwa kwamanzi amdaka kunye nokuqiniswa kweoyile.
TPU iqulathe umaleko wangaphakathi wokubambelela, umaleko owomeleleyo welaphu kunye nomaleko wangaphandle wokubambelela. Umaleko owomeleza ilaphu wenziwa ukusuka kwimicu ye-polyester, umaleko wokubambelela wangaphakathi nangaphandle wenziwe ngokutyabeka i-polyurethane kumacala omabini omaleko owomeleleyo.
Ingcaciso yeMveliso Elinye igama i-PVC Canvas yeTanki yokuFama Ubomi be-Span Malunga neminyaka esi-7 ukuya kweli-10 yesicelo sokufuya iintlanzi / ukulima ii-Shrimp Iimpawu ze-5,000L- 1,000,000LAYamkela izinto zokwenza ngokwezifiso 1) Imisonto ephezulu ye-polyester yokuhombisa nge-PVC; 2) Itekhnoloji elaminethiweyo kunye ne-Hot-mel ...
Ingcaciso yeMvelisoElinye igama le-PVC Canvas yeTanki lokuFama Ubomi beSpan Malunga neminyaka esi-7 ukuya kweli-10 yesicelo sokufuya iintlanzi / ukulima ii-Shrimp. 2) Itekhnoloji elaminethiweyo kunye nokushushu -...
Ingcaciso yeMveliso Elinye igama i-PVC Canvas yeTanki yokuFama yokuFama I-1.5mm eyongezwayo iiBolts kunye namandongomane: Amandla aphezulu e-barts kunye namandongomane, Ubungqina bamanzi: I-3 intshi, i-3.5 intshi ye-Span Life malunga neminyaka esi-7 ukuya kweli-10 yesicelo sokufuya iintlanzi / iStrimp Farming / iStor Water ...
Ipuli yokuqubha edibeneyo
Ngaphezulu kwePhuli yokuDada / Amachibi okuqubha aQinisekayo Elinye igama lesinyithi sechibi lamanzi, ngaphandle kwempahla enkulu enetyhefu ye-PVC Tarpaulin Ubunzima 1.0mm-1.5mm Imilo yoxande / isikwere; Umjikelo / Isangqa Umbala oqhelekileyo Grey, Orenji, Luhlaza, Luhlaza, Mhlophe okanye eminye imibala Umthamo 1000L 5000L 10000L 20000L 50000L 100000L okanye enkulu Isakhelo Material umbhobho zentsimbi kwalenza "I" "U" uhlobo eyongezwayo (Uyazikhethela) Impompo lokucoca amanzi, Pool Cove .. .